Mayelana NATHI - CHANGZHOU ENGINE RUBBER & PLASTIC CO., LTD
Ukuzibophezela kwimikhiqizo ye-yoga ngempilo enempilo nejabule kakhulu, eyakho, eyomhlaba wonke！
INJINI yasungulwa ngonyaka we-2012, ifektri ekhethekile ekwenzeni imikhiqizo ye-yoga, eseChangzhou, isikhungo sokukhiqiza sesifunda saseYangtze River Delta.
INJINI yinkampani ehlanganisa ukwakhiwa, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kanye nensizakalo, enochungechunge oluphelele lwezimboni kanye nokuncintisana okuyisisekelo.
INJINI isebenze amakhulu ezinkampani emhlabeni wonke. Ngaphezu kuka-30 wabo amakhasimende abambisene isikhathi eside. Phakathi nale nqubo, imikhiqizo yethu ikhwalithi kanye nezinsizakalo zamukelwa kahle.
Njengethimba lochwepheshe, sizibophezele ekwakheni uhlobo lwethu lomkhiqizo ngenkathi sinikeza izinsizakalo ezihamba phambili kumakhasimende womhlaba wonke.
INJINI ukukhetha kwakho okuhle kakhulu komlingani webhizinisi.
I-CHANGZHOU ENGINE RUBBER & PLASTIC Co, Ltd.yifektri egxile ekukhiqizeni i-PE foam board, i-EVA foam board, i-PE filler ngokuhlanganyela, i-yoga mat, ibhulokhi ye-yoga, ama-foam roller kanye nebhalansi pad.
Ngokusekelwa kwedatha enkulu yamakhasimende, besisebenza kanzima ukuthuthukisa, ukuthuthukisa kanye nokwenza imikhiqizo engcono ibe ngcono. Njengamanje, INJINI izuze ukuthuthuka okuhle ezimakethe zasekhaya nezamazwe omhlaba. Sinikeza amakhasimende ukusebenza okuphezulu, imikhiqizo esezingeni eliphezulu ngokususelwa kumazinga esezingeni lomkhakha.
Umqondo "wokuthuthukisa imikhiqizo yobuchwepheshe obuphakeme nokuhlala isikhundla esiphambili embonini" usiholela ekutheni sithuthukise ngokuqhubekayo futhi sicebise imikhakha yomkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende.
INJINI yinkampani ehlanganisa ukwakhiwa, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kanye nensizakalo, enochungechunge oluphelele lwezimboni kanye nokuncintisana okuyisisekelo. Ifektri yethu ithatha indawo engamamitha-skwele ayi-10,000, nemishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, amandla wokukhiqiza aqinile, abasebenzi bezobuchwepheshe abanolwazi, nohlelo oluqinile lwe-QC
Ulayini wokuqala wokukhiqiza igwebu wakhiwa, futhi umkhiqizo wokuqala wesivivinyo waba yimpumelelo ephelele.
Imigqa emibili yokukhiqiza enegwebu yanezelwa kwisisekelo sokuqala, futhi amandla wokukhiqiza aphindeka kabili.
Inani lezintambo zokukhiqiza lenyuke lafika ku-4, futhi ukukhiqizwa kwaqalwa ngokuphelele. Ukuthengisa kuqhubeke nokukhula, kukhuphuka i-100% unyaka nonyaka.
Inkampani isuke eMoujia Village yaya eShijiaxiang Village.
Kusukela ngo-2012, i-Engine ibikhiqiza imikhiqizo ye-yoga, ngobuchwepheshe kakhulu.
Ubungqabavu bethu be-yoga mat benziwe ngezinto eziyi-100% zezintombi, ezinokuqina okuphezulu nendawo ekhululekile, ukujiya okujwayelekile kwe-6mm.
Ibhulokhi lethu le-yoga lokuzivocavoca lenziwe ngogwebu lwe-EVA, ngobuningi kusuka ku-66-76 kg / CBM. Buqinile futhi bunamanzi, busetshenziselwa ukulungisa ukuma.
Ukuqina kwethu kwe-foam roller kwenziwa nge-eco-material. Iphuzu lalo le-3D massage lingakhulula imisipha yakho eqinile, esetshenziswa ekwelashweni ngokomzimba.
Inzuzo enkulu yamanani
▪Isevisi ye-MOQ ephansi ne-OEM & ODM
Isipiliyoni seminyaka engu-15 nezitifiketi eziningi
Ifektri yethu inezinto zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme ezingaphezu kuka-30 ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo. Abasebenzi bethu baqeqeshiwe ngokomsebenzi futhi baneminyaka eyi-10 yokuhlangenwe nakho kokusebenza.
Imithwalo emhlabeni wonke, ngenhliziyo eyodwa ifinyelela kwizigidi eziyi-100.
Ngiyethemba ukuthi ngemizamo engapheli yabo bonke ozakwabo, imikhiqizo yenkampani ingaya emhlabeni.
Ngenkathi ufeza umsebenzi wenkampani, futhi ungazuza ukuzithoba kwabo bonke ozakwabo
Dala inani lamakhasimende futhi uzenzele amathuba.
Le nkampani ihlala inamathela kuzinga lekhasimende kuqala kuphela, futhi izama ukwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo nokuthuthukisa izinga lobuchwepheshe.
Ngenkathi idala inani eliphakeme lamakhasimende, liphinde lidale namathuba okuthi inkampani nabo bonke ozakwabo babone imigomo yabo empilweni!
Ukuzibophezela kwimikhiqizo ye-yoga engaletha impilo ejabulisayo kubantu emhlabeni wonke.
I-Yoga ukuzivocavoca kweminyaka engu-5 000 mayelana nomzimba, ingqondo nomoya. Inhloso yalo ukuthuthukisa ukuqina komzimba nengqondo yabantu, ukuze kuzuzwe isimo sobunye bomzimba nengqondo.
Ekuqaleni kokuzibiza kwenkampani yethu, sithathe "imikhiqizo ye-Yoga eletha impilo ejabulisayo kubantu emhlabeni jikelele" njengenhloso yethu, ukuze abantu abaningi ngokwengeziwe bathole impilo enempilo futhi enhle kwezemidlalo.